कस्ताे छ प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था ?
उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधारको भएकोे छ । महाराजगञ्जस्थित ‘मनमोहन ‘कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर’का कार्यकारी निर्देशक प्रा डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाइएको हो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यही मङ्सिर १० गते सोही केन्द्रमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
ओलीको आठौं पटक डायलसिस: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइतबार आठौं पटक डायलसिस गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा गत मंगलबार भर्ना भएयता यो चौथो डायलसिस हो । त्यसअघि ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा २६ दिनमा ४ पटक डायलसिस गरिएको थियो ।
नेपाल राज्य आजको भौगोलिक स्वरूपमा आउनुमा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको योगदानलाई नस्वीकार्नेहरू पनि छन् । ठूलो राज्यको राजा हुने मोह वा अन्य जुनसुकै उद्देश्यले राज्य विस्तार गरेका भए पनि इतिहासको अध्ययन र लेखाजोखा गर्दा बृहत् नेपाल राज्यका जन्मदाता पृथ्वीनारायण नै हुन् । नेपाल एकीकरण पूरा हुन भने त्यसपछि विभिन्न वीर–वीरांगनाले गरेको योगदान महत्वपूर्ण छ । वि.सं. १६१६ मा द्रव्य शाहले लिगलिग कोट राज्य खडा गर्दै गोर्खा राज्य स्थापना गर्नु नेपाल राज्य निर्माणको जग थियो, जुन वि.सं. १९१४ मा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता ल्याएपछि पूरा भएको हो ।
आजको भन्दा विशाल स्वरूपमा रहेको नेपालको लागि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि भने विडम्बनाको रूपमा छ । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच उक्त सन्धि भएको थियो ।
१०. अंग्रेजले विभिन्न दिशाबाट हमला गर्नु पनि नेपालको लागि दुर्भाग्य बन्यो । पश्चिम गढवालदेखि पूर्वमा टिष्टा नदीसम्मको करीब ५०० कोसको दूरीमा अंग्रेजले विभिन्न स्थानबाट हमला गर्‍यो । जसको प्रतिकार गर्न नेपालले आफ्नो फौज र युद्ध सामग्री विभिन्न ठाउँमा छरेर राख्नुपर्‍यो । परिणामतः प्रतिरक्षात्मक स्थानहरू कमजोर भए र अंग्रेजलाई जितको आधार बन्यो..... थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।